Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Ny Bulgaria Jewelry Store any Paris dia nopotehina 10 tapitrisa €
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovao farany Brezila • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • Safety • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Firavaka mitentina 10 tapitrisa € nongotana tao amin'ny heny bizenist tao Paris
Ny talata tolakandro teo no nisehoan'ity halatra tany Paris ity. Raha mbola tsy notondroin'ny polisy tamin'ny fomba ofisialy ilay trano fivarotana, dia hita ny fisian'ny fampiharana lalàna mavesatra tao amin'ny butik'i Bulgari, izay toa lasibatry ny jiolahy.
Norobain'ny mpanendaka ny fivarotana firavaka Bulgari any afovoan'i Paris.
Firavaka mitentina 10 tapitrisa € nangalarina nandritra ny fandrobana andro.
Voasambotry ny polisy frantsay ny olona roa voarohirohy taorian'ny fanenjehana haingana.
Fivarotana firavaka Paris afovoan-tanàna ambony eo amin'ny toerana malaza Vendôme no voadonan'ny mpanendaka ary tombanana ho 10 tapitrisa (11.8 tapitrisa dolara) ny firavaka voalaza fa nangalarina nandritra ny andro.
Ny talata teo tokony ho antoandro teo no nisehoan ny halatra. Raha mbola tsy notondroin'ny polisy tamin'ny fomba ofisialy ilay trano fivarotana, dia hita ny fisian'ny fampiharana lalàna mavesatra Bulgari Boutique, izay toa lasibatry ny jiolahy.
Paris Voasambotry ny polisy ny olona roa voarohirohy, ary mitohy ny fanarahan-dia ataon'ireo mpangalatra hafa.
Voasambotra ny olona roa voarohirohy rehefa nanandrana nitsoaka ny toerana nitrangan'ny asa ratsy izy ireo, hoy ny polisy, nefa tsy nanome ny antsipiriany intsony, fa ny loharanom-baovao sasany avy amin'ny polisy dia nanondro fa lasa fanenjehana haingam-pandeha ny halatra, satria nanandrana nitsoaka ireo olon-dratsy. BMW fiara sy moto scooter roa.
Raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana dia nisy polisy iray naratra kely nandritra ny fifanenjehana, rehefa voadonan'ny fiara izy, raha voatifitra teo amin'ny tongony kosa ny iray tamin'ireo voarohirohy.
Mbola tsy fantatra kosa ny isan'ireo ahiahiana ho fantatra. Raha ny tati-baovao voaray dia nahavita nandositra niaraka tamin'ny fakana entana halatra be dia be izy ireo manodidina ny € 10 tapitrisa.
Ity tranga ity dia ny farany tamin'ny firavaka firavaka avo lenta tao an-drenivohitra frantsay tamin'ity fahavaratra ity. Tamin'ny volana jolay dia nisy mpangalatra mitam-piadiana nibata vato sy firavaka sarobidy tamin'ny mazava antoandro avy any Chaumet magazay akaikin'ny Champs-Elysées. Ilay mpanendaka tamin'io fotoana io dia voasambotra niaraka tamin'ny mpiray tsikombakomba taoriana kelin'ny nanafihana, ary azo ny entana, mitentina 3 tapitrisa € ($ 3.5 tapitrisa).
Andro vitsivitsy monja aorian'ny Chaumet heist, jiolahy roa voadona a Dinh Van magazay, nangalatra vola 400,000 € eo ho eo, ary firavaka miaraka amin'ny tombana mitentina € 2 tapitrisa ($ 2.3 tapitrisa).